ရွှေညာသားလေး ရွာပြန်တုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ရှု့ခင်းပုံလေးတွေပါ ကျုပ်တို့ရွာဘက်ကနေ မြင်ရတဲ့ ပုပ္ပားတောင်ကြီးရဲ့ပုံလေးတွေရယ် ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကပုံလေးတွေရယ် အပျင်းပြေ ကြည့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဝေးရောက် ကျွန်တော့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး အညာအလွမ်း ရွာအလွမ်းတွေဖြေဖျောက်နိုင်ပါစေ...။
ကျွန်တော်တို့ ရွာဘက်က မြင်ရတဲ့ ပုပ္ပားတောင်မကြီးရဲ့ပုံပါ
ရွာမြောက်ဘက် ကျောက်တန်းပေါ်မှာ သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်လေးပါ
ဒီမှာလည်း ရေသွားချိုးခဲ့သေးတယ် ရေတွေက ကျောက်ခဲကြားကနေ ဖြတ်ပြီး စီးဆင်းနေတာဆိုတော့ ကြည်လင်သန့်ရှင်းပြီး အေးမြနေတာပါပဲဗျာ...ပြန်ကိုမပြန်ချင်ဘူး....
ရေတံခွန်နားမှာ ဒီလိုကျောက်တုန်းတွေကလည်း အများကြီးပဲ
ရွာစာသင်ကျောင်းနားကမြင်ရတဲ့ ပုပ္ပားတောင်ရဲ့ ညနေခင်းအလှ
နေ၀င်ပြီးစ အချိန် ရွာမြောက်ဘက်က လယ်ကွင်းပြင်
ချောင်းထဲကို ရေချိုးသွားရင်း မသိအောင် ရိုက်ထားတာ တောင်ဘက်ရွာက ညီလေးတစ်ယောက်ပါ
ချောင်းရေကျထားတော့ ရေတွေကသန့်ပြီး အေးမြနေတာပဲ ရွာပြန်တုန်း ဒီနားကိုအမြဲသွားသွားပြီး ရေချိုးခဲ့တယ် ရေအိုင်ထဲဆင်းပြီး ရေမချိုးရတာ ကြာတော့ လက်ပစ်ကူးလိုက် ဘောင်ဘင်ခတ်လိုက်နဲ့ ချိုးလို့ကို မ၀ပါဘူးဗျာ....
ပို့စ် အသစ်တင်မယ်လို့ ကြံလိုက်တိုင်း အလုပ်လေးတွေက ပေါ်ပေါ်လာလိုက်၊ အင်တာနက်လိုင်းက နှေးလိုက်နဲ့ မတင်ဖြစ်တာ...ဒီနေ့တော့ စောစောထပြီး ကြိုးစားကြည့်တာ အောင်မြင်သွားတယ်....။
လာရောက်အားပေးကြတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ အွန်လိုင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, November 09, 20114comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘာလိုလိုနဲ့ သီတင်းကျွတ်လတောင်ရောက်လာပြီနော်... သီတင်းကျွတ်ဘုရားပွဲနဲ့ ဝေးနေတာ သုံးနှစ်လောက် ကြာသွားပြီဆိုတော့ ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်ဘုရားပွဲကို ပြန်ပြီးဆင်နွှဲဖို့ ရွှေညာသားတို့ အားခဲထားတယ်ဗျ။ အလုပ်ကိစ္စလေးတွေနဲ့မို့ ပြန်ရောက်ကတည်းက ရွာကို တစ်ညအိပ်ပဲ ရောက်သေးတယ်။ ရွာကဆွေမျိုးတွေက မင်း ငါတို့ရွာလာပြီး တစ္ဆေခြောက်တာလားတဲ့။ ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာပဲလေ။ ကျွန်တော်သွားတာကလည်း ညရောက်မနက်ပြန်ဆိုတော့ ဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုတောင် နှံ့အောင်မရောက်ခဲ့ဘူး။ ၀န်းထမ်းဆိုတော့လည်း နေချင်သလိုနေလို့မရဘူးလေ တာဝန်ဆိုတာကလည်း ရှိသေးတော့ ဆွေမျိုးတွေကို သီတင်းကျွတ်မှပဲ အေးအေးဆေးဆေး လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး နှစ်သိမ့်ခဲ့ရတယ်။
ဟော အခုသီတင်းကျွတ်ပြန်တော့လည်း ကျောင်းမှာက အလုပ်တွေကများသား။ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပိတ်ပေမဲ့ ဆရာတွေမှာက ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာ။ ဒေးပြီးတော့ အဝေးသင်စာမေးပွဲ အဝေးသင်စာမေးပွဲပြီးတော့ ဒေးတွေကျောင်းပြန်ဖွင့်နဲ့ ဆက်တိုက်ပါပဲ။ အဝေးသင်ကလည်း အခုမှ တစ်သုတ်ပဲ ဖြေရသေးတယ်။ နောက်ထပ်နှစ်သုတ်ကျန်သေးတယ်ဆိုပဲ။ ဒုတိယအသုတ်ဖြေမယ့်အချိန်က ရွာဘုရားပွဲရက်နဲ့ တိုက်နေလို့ အခန်းစောင့်ရက်ကို နောက်ဆုံးနေ့တွေမှ ပါရင်ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ထဲကနေ ဆုတွေတောင်းနေမိတယ်။ ရွာဘုရားပွဲနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာ ကြာပြီဆိုတော့ ဒီနှစ်ကို အတော်လေး အားခဲထားတာ။ ပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက ရွာမှ ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း စကားကို အေးအေးဆေးဆေး မပြောရသေးဘူးလေ။ နောက်ပြီး ရွာဘုရားပွဲမှာ ကျွေးတဲ့ ဖရုံသီးနဲ့ ၀က်သားရောချက်တဲ့ ဟင်းကိုလည်း မစားရတာ ကြာလှပေါ့။ အခုအချိန်က ရွှေညာသားတို့ ရွာမှာ ဖရုံသီးတွေ အတော်လေးပေါတာလေ။ နှစ်စဉ် ရွာဘုရားပွဲဆိုရင် ဖရုံသီးနဲ့ဝက်သားရောချက်ပြီး ကျွေးနေကြမို့ ဒီနှစ်လည်း အစဉ်အလာ မပျက်ကျွေးမှာသေချာတယ်။
ဘယ်အရပ်ဘယ်ဒေသ ပဲရောက်ရောက် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာက ဓလေ့စရိုက် လေးတွေကို အမြဲတမ်း သတိရတယ်။ အညာဓလေ့ သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ သူတွေကလည်း ပေါမှပေါလေ။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းတွေ့ရင် "ဟေ့ကောင် မင်း သီတင်းမကျွတ် သေးဘူးလား" ဆိုပြီး စကြတယ်။ ဆိုလိုတာက ဟေ့ကောင် မင်း မင်္ဂလာမဆောင် သေးဘူးလားလို့ သွယ်ဝိုက်ပြီး မေးတာပေါ့။ သီတင်းမကျွတ်တဲ့ သူတွေက ၀ါဆိုဦး ရောက်ရင် မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်။ ဒီနှစ်က အညာမှာ မိုးတွေကလည်း ကောင်းချက် လွန်ရောပဲ။ နှမ်းတွေလည်း ရကြတယ်။ အညာက တောင်သူတွေ လယ်ယာလုပ်ငန်း အဆင်ပြေကြတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ စပါးတွေကတော့ အနှံတွေထွက်တဲ့လယ်ကထွက်၊ တချို့လယ်တွေက ဖုံးတုန်း လုံးတုန်း ပေါ့။ ဒီအကြောင်းတွေက ရွာပြန်ရောက်လို့ သိရတာမဟုတ်ရပါဘူး၊ ရွာကညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက် အဝေးသင်လာဖြေရင်း ပြောပြလို့ သိရတာပါ။
နောက်ပြီး သူကပြောသေးတယ် အကို ရွာပြန်မလာတော့ဘူးလားတဲ့။ ဒီနှစ်ရွာဘုရားပွဲက ကထိန်နဲ့ တွဲပြီး လုပ်မှာ၊ ကထိန်ကလည်း အရင်နှစ်တွေကလို တစ်ဦးတည်း ကထိန်မဟုတ်ဘူး စုပေါင်းဘုံကထိန် လုပ်မှာတဲ့လေ။ အလိုလိုမှ ရွာကိုပြန်ချင်နေပါတယ်ဆို သူကလာပြီး နှိုးဆွနေသေးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်ကလည်း ပြန်မှာပေါ့၊ ကျောင်းမပိတ်ရင် ခွင့်တင်ပြီးတော့ကို ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မေးလိုက်သေးတယ် အကို သီတင်းကျွတ်တော့မှာလားတဲ့ဗျာ။ ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေပေးစရာက မရှိတော့ အင်း သီတင်းတော့ မကျွတ်သေးဘူးကွာ ၀ါဆိုဦးမှပဲလို့ ဖြေလိုက်ရတယ်။ ဘာခက်လဲနော့ ၀ါဆိုဦးကျတော့ သီတင်းကျွတ်မှလို့ ပြောင်းလိုက်ယုံပဲလေ ဟဲဟဲ...။
ရွာကပြန်လာရင်တော့ ဘုရားပွဲအကြောင်းလေးတွေကို ပြန်ရေးပေးမယ်နော်။ မြန်မာပြည်က ကွန်နက်ရှင်နဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေတော့ တင်လို့ မလွယ်ဘူးဂျာ...။ ကျွန်တော်အတွက် ဒီလောက် စာလေးရေးလို့ရတာကိုပဲ သိန်းဆုပေါက်သလို ခံစားပြီး ၀မ်သာပီတိဖြစ်ရတယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလည်း သီတင်းကျွတ်လား ၀ါဆိုဦးလား အစီအစဉ်ရှိရင် အသိပေးအုံးနော်...။ လက်ဖွဲ့လေး ဘာလေး ပို့ပေးရအောင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ တခုသော သီတင်းကျွတ်မှာ ဖြစ်မှာပေါ့ ဘယ်သီတင်ကျွတ်လဲ ဆိုတာကတော့.....။
ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်ကတော့ အဖိုးအဖွားတွေကို ကန်တော့ရင်း၊ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရွာကဘုရားပွဲကို ဆင်နွှဲရင်း၊ မစားရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဖရုံသီးများများ ၀က်သားနည်းနည်း ရောချက်တဲ့ အညာဟင်းလေးကို သွားလွေးရင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေထဲက သီတင်းကျွတ်မည့်သူကို လက်ဖွဲ့ရင်း ရွာကိုပြန်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲထားလေရဲ့ဗျာ....။
အစားအသောက်ကတော့ ဘုရားပွဲကကျွေးတဲ့ အညာထမင်းဟင်းပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး ပုပ္ပားတောင် အနီးတ၀ိုက်က ထွက်တဲ့ ရခိုင်ငှက်ပျောသီး ၀၀တုတ်တုတ်တွေရယ်၊ အညာမုန့်ဆီကြော်တွေရယ်လည်း ကျွေးအုံးမယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, October 09, 20115comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကံချင်းတူလျှင် ဥာဏ်သာတဲ့သူက အနိုင်ရတယ်။
ဥာဏ်ချင်းတူလျှင် ဝီရိယသာတဲ့သူက အနိုင်ရတယ်။
ဝီရိယချင်းတူလျှင် စည်းကမ်းရှိတဲ့သူက အနိုင်ရတယ်။
စည်းကမ်းရှိတာချင်းတူလျှင် စေတနာရှိတဲ့သူက အနိုင်ရတယ်။
စေတနာရှိတာချင်းတူလျှင် ရိုးဖြောင့်တဲ့သူက အနိုင်ရတယ်။
ရိုးဖြောင့်တာချင်းတူလျှင် အပြောချိုသူက အနိုင်ရတယ်။
အထက်က စာသားလေးတွေက တစ်ဆောင်တည်းနေ ရုံးဝန်ထမ်းအစ်ကို တစ်ယောက်ရဲ့အခန်းကို အလည်သွားရင်းနဲ့ သဘောကျလို့ကူးလာတာလေးပါ။ ကျွန်တော်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် မျှဝေပေးတာပါ။ ဘဝမျိုးစုံကို ဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လောကီလူသားတွေအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကတော့ အသုံးတည့်မည်ထင်ပါတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, October 07, 20113comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဆရာဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက ကျောင်းသားပါပဲ....
စာရေးချင်တာတွေက များနေတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစပြီး ရေးရမယ်မပြောတတ်တော့ဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ် ရွှေညာသားလေး လုပ်ဆောင်နေရတာလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးဖို့စိတ်ကူးမိတာကြောင့် ဒီပို့စ်လေးကို ဘလော့ခ်ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပါပဲ ရွှေညာသားလေးဟာ အရင်တုန်းကတော့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းက တက္ကသိုလ်တခုမှာ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်မှာ ကျွန်တော်ဘ၀ အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စရာလေးတွေ အများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ပူပူနွေးနွေး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၈) နှစ်ကျော်လောက်တုန်းက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ စာမေးပွဲ ၀င်ဖြေခဲ့တဲ့ ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေမှာ စာမေးပွဲခန်းစောင့် တာဝန်ပြန်ကျခဲ့တာပါပဲ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ၀အကြောင်းနဲ့ ထင်ဟပ်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို အရင်က ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘ၀မှာ တစ်ခါတလေကျတော့ မမျှော်လင့်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်မှန်တာပဲနော်။
ပထမဦးဆုံး စာမေးပွဲ အခန်းစောင့်တာဝန်ကျတဲ့နေ့ကဆို စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိပါဘူး။ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက စာမေးပွဲစဖြေမယ်နေ့ဆိုရင် ကျက်မှတ်ထားတဲ့ စာတွေကို ခေါင်းထဲမှာစဉ်စားရင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့် အခန်းရှေ့မှာ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးမည့်အချိန်ကို စောင့်ခဲ့ရတာတွေ၊ ဘယ်လောက်ပင် စာရသော်လည်း စာမေးပွဲဆိုတဲ့ ဖိအားကြောင့် အနည်းနဲ့အများတော့ ရင်ခုန်မိတာ ကျောင်းသားတိုင်း ကြုံးဖူးမှာပါ။ အဲ့ဒီလို အချိန်ကာလတော်တော်များများကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးတဲ့ ကျွန်တော်...
ဒီနေ့မှာတော့ ကျောင်းကထုတ်ပေးထားတဲ့ ယူနီဖောင်းနဲ့တိုက်ပုံကိုဝတ်ပြီး မိမိတာဝန်ကျရာ အခန်းကို အဖြေလွှာစာအုပ်တွေကိုင်ပြီး ခပ်သွက်သွက်လျှောက်သွားမိတယ်။ အခုခေတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့အရွယ်က သိပ်မကွာလှတာမို့ ယူနီးဖောင်းသာဝတ်မထားရင် ဆရာမှန်းသိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စာမေးပွဲဖြေမည့် ကျောင်းသား တစ်ယောက်လို့ပဲထင်မှာ။ နောက်နှစ်ကျောင်း ပြန်ဖွင့်လို့ အတန်းဝင်ရရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို တွေးပြီး ရင်တုန်မိသေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း ဆရာငယ်ငယ်ဆိုရင် ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးတွေ။
ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကတော့ ဒီလိုဘယ်ဟုတ်မလဲ သင်သမျှစာကို ကျက်မှတ်တွက်ချက်ပြီး မေးလာတဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရင်း စာမေးပွဲခန်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ၀င်ခဲ့ရတာပေါ့။ အခုတော့ စာဖြေသူအဖြစ်မဟုတ်တော့ဘဲ စာဖြေသူတွေကို ကြီးကြပ်ရတဲ့ တာဝန်နဲ့ဆိုတော့ ကျောင်းသား ဘ၀တုန်းကထက် ပိုပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ အခန်းမှာဖြေဆိုမည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ စည်းကမ်းရှိရှိ စာမေးပွဲဖြေဆိုစေဖို့ စာမေးပွဲခန်းစောင့်တဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများမှာ လုံးဝတာဝန်ရှိတယ်လို့ မှာကြားထားတာကလည်းရှိသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်စောင့်တဲ့အခန်းက ပြဿနာဖြစ်ရင် အခန်းစောင့်တဲ့ ဆရာဆရာမတွေ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ စာမေးပွဲဖြေခဲ့တုန်းကထက် တာဝန်ပိုကြီးတယ် ဆိုတာကို သိလာရတယ်။ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ အချိန်သုံးနာရီအတွင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲကို ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီး ဖြေဆိုနိုင်ဖို့၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြေဆိုနိုင်ဖို့၊ အခန်းထဲမှာ တခြားကြီးကြပ်ရေးမှူးများနဲ့အတူ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်ရတာကလည်း အမောပါပဲ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့ အချိန်သုံးနာရီအတွင်းမှာ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဖို့ စိတ်ထဲကနေ ဆုတောင်းရသေးတယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ လုပ်သက်အားဖြင့်ရော၊ အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ရော အစစအားနည်းသေးတဲ့ ဆရာပေါက်စတစ်ယောက်အတွက် စာမေးပွဲခန်းစောင့် တာဝန်ဆိုတာ မလွယ်ကူလှမှန်း ကိုယ်တိုင်ကြုံမှ သိတော့တယ်ဗျ။ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကတော့ ကိုယ်ဖြေဆိုရမည့်အခန်းကိုသွား ကိုယ့်ခုံအမှတ်နေရာမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး မေးလာတဲ့ မေးခွန်းမှာ ကိုယ်သိသမျှ၊ ရသမျှဖြေဆိုပြီးရင် အခန်းစောင့်ဆရာဆရာမဆီမှာ အဖြေလွှာအပ်ပြီးထွက်လာခဲ့ယုံပဲလေ။ ဆရာအဖြစ်နဲ့ ကျတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တောပြန်ဘူး။ ကိုယ့်ဆီလာအပ်တဲ့ အဖြေလွှာစာအုပ်မှာ ခုံအမှတ်ရေးတာမှန်မမှန်၊ ထုတ်ပေးတဲ့ ဖြေလွှာစာအုပ် ဟုတ်မဟုတ်၊ မမှန်မကန်လုပ်ပြီး ဖြေတာတွေ ဖြေလွှာစာအုပ်မှာ ပါမပါ စတာတွေကို စနစ်တကျ စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံယူရတယ်။
ကျောင်းသားဘ၀နဲ့ စာရင် ဆရာလုပ်ရတဲ့ ဘ၀က အစစအရာရာမှာ တာဝန်ပိုကြီးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံတော့မှ သိလာရတယ်ဗျာ။ ပထမဆုံး နေ့မှာတော့ အခန်းစောင့်တာဝန်ကို ပထမဆုံးလုပ်ဖူးတာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ နောက်နေ့တွေကျတော့လည်း အရင်နေ့က အတွေ့အကြုံကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု့သိပ်ပြီးမခံစားရတော့ပေမဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့အခန်းတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်ရတာတော့ ခြေသလုံးတွေကို တောင့်တင်းနေအောင်ပါပဲ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ ဒီဆရာပေါက်စ ထိုင်ကိုမနေဘူး လို့ထင်မှာပဲနော်။ ဒါပေမဲ့လည်း တာဝန်က တာဝန်ပဲလေ။ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ။
ဆရာဘ၀နဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ ကွာခြားတာတွေကလည်း ရှိသေးဗျာ။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပါပဲ။အခုတော့ မနက်ဖြန် စာမေးပွဲခန်းစောင့်ရအုံးမှာမို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ထားလိုက်တယ်...နောက်နေ့မှ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းရင် ဆက်ပြီးရေးပါအုံးမယ်။ ဘလော့ခ်မှာ စာမရေးဖြစ်တာ နှစ်လကျော်လောက်ကြာသွားလို့ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေရင် သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးပါနော်...။
အားလုံးသော ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, October 03, 20114comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ရွှေညာသားလေး အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရတဲ့နေ့လေးပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နှစ်လကျော်နီးပါး ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘလော့အိမ်လေးဆီကို ပြန်ရောက်ခဲ့လို့ပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော အခုလိုလေး ပြန်ဝင်ခွင့်ရတာကိုပဲ ကျွန်တော်အရမ်းကျေနပ်မိတယ်။ အရင်ရက်တွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ၀င်ကြည့်ပြီး ဘာမှမရေးခဲ့နိုင်ဘူးလေ။ ပြောချင်တာလေးတွေကို စီဘောက်ကနေ ရေးပြောနေရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖြစ်။ ဒီနေ့တော့ လမ်းဖြောင့်တယ်လို့ပဲ ပြောရမလား၊ စောင့်ရကျိုးနပ်တယ်ပဲ ခေါ်မလား ဒီစာလေး ရေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်။ ကံကောင်းလို့ အင်တာနက်လေး သုံးခွင့်ရတုန်း ဘလော့စာမျက်နှာလေးတွေ ၀င်ဖတ်ပြီး အလွမ်းဖြေရင်း ဘလော့ဂါဒေါ့ကွန်းကနေ အကောင့်လေးရိုက်ထည့်ပြီး ၀င်ကြည့်မိတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တော့ အပြည့်မထားဘူး။ အရင်နေ့တွေက ၀င်လို့မရတော့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး နှေးကွေးစွာလည်နေတဲ့ Firefox က အ၀ိုင်းလေးကို ကြည့်နေရင်း စာမျက်နှာလေး ပြောင်းသွားတော့ ထခုန်မိမတတ်ပျော်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် အနီးမှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းကို အားပါးတရ ရိုက်လိုက်မိသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရေငတ်နေတုန်း ရေတွင်းထဲကျသွားသလိုပါပဲ။ စာတွေရေးနိုင်တော့မှာမို့ အတိုင်းမသိပျော်မိတယ်ဗျာ။တကယ်ပါပဲ....တဆက်ထဲမှာပဲ ကျွန်တော့ဘလော့လေးဆီကို လာလည်ပြီး စိတ်ကူးမိရာရေးတဲ့ စာတိုပေစလေးတွေကို လာရောက်အားပေးကြပါအုံးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, October 03, 20112comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အားလုံးသော ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးက ကျွန်တော်ရဲ့ နောက်ဆုံးပို့စ်လေး လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်ကိုရောက်ရင် အွန်လိုင်းဆိုတာနဲ့က အဆက်ပြတ်သွားဖို့ သေချာသလောက်ရှိတာကြောင့်ပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဘလော့ လောကကိုရောက်တာ ငါးလနီးပါးလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီငါးလအတွင်း ကျွန်တော်စိတ်ထဲ ရှိတာလေးတွေကို ရေးသားမျှဝေခွင့် ရတဲ့အတွက် အတော်လေးကျေနပ်မိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်ရေးသမျှ တင်သမျှလေးတွေကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ အားလုံးသော ကျွန်တော့်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်။
လူတွေကို မမြင်ဖူးပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အားလုံးကို ရင်းနှီးနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများလည်း ရွှေညာသားလေးဆိုတာကို မမြင်ဖူးပေမဲ့ စိတ်ထဲကတော့ အညာသား အသားမည်းမည်းလေးကို မြင်ယောင်မိကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုဒီပို့စ်ရေးတဲ့ အချိန်ထိတော့ သကြားခဲဖြစ်နေတယ်ဗျ။ နေပူမခံရတာကြာလို့လေ။ သိပ်တော့ မကြာတော့ပါဘူး ထန်းလျက်ခဲ ပြန်ဖြစ်တော့မှာ (အသားမည်းတော့မှာပြောတာနော်)။
ဘာပဲပြောပြောလေ ဒီလိုနေရာကိုရောက်လို့ အင်တာနက်ဆိုတာကို ဖောဖောသီသီ သုံးရပြီး အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတွေ အချင်းချင်း စကားလုံးလေးတွေနဲ့ သိကြ၊ခင်ကြ၊ ရင်နှီးကြပေမဲ့ ရွှေညာသားလေး ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ ရေးသာရေးနေရတယ် စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်မျိုးကြီး ခံစားရတယ်ဗျာ။ အမေက ပြောဖူးတယ်။ သူ့အကိုအကြီးဆုံး ကျွန်တော့်ဦးလေးက တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ အိမ်ထောင်ကျတာ။ ရွာကို အလည်လာပြီး ပြန်မည့်နေ့ညရောက်ရင် ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောတော့ဘူးတဲ့။ ဘုရားစင်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်တိုင်ကိုမှီပြီးတော့ ငိုတာတဲ့လေ။ ကျွန်တော်လည်း ဦးလေးရဲ့ တူပဲလေနော့။ ပိုရင်သာပိုမယ် လိုတော့မလိုဘူး။ ဒါကြောင့် စာတွေများများမရေးတော့ဘူးနော်။ ရှေ့ဆက်ရေးရင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတယ်။ တော်ကြာ မျက်ရည်တွေချောင်းစီးနေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါ။ ကျွန်တော်ရွှေညာသားလေးက အားလုံးကိုခင်တယ်၊ လေးစားတယ်၊ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ မျက်စိလည်လမ်းမှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းကြုံခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ် အခါအခွင့်သင့်လို့ အညာကိုရောက်ခဲ့ရင် ရွှေညာသားလေးတို့ရွာကို အလည်လာခဲ့ဖို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ အညာသူအညာသားတွေက ဆင်းရဲပေမဲ့ ခင်တတ်ပါတယ်၊ ဖော်ရွေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲ ရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့ လာလည်ကြပါနော်။ အသားမည်းမည်းနဲ့ ရွှေညာသားလေးက အမြဲကြိုဆိုလျက်ပါဗျာ…။
အားလုံးသော ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စအ၀၀ အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့ ရွှေညာသားလေးက ဆုတောင်မေတ္တာပို့သခဲ့ပါတယ်ဗျာ…။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, July 08, 2011 13 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, July 06, 20117comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီသီချင်းလေးထဲကလိုပဲ အကြင်နာ၊မေတ္တာစေတနာတွေနဲ့ နွေးထွေးနေတဲ့ အမေ့အိမ်ကို မကြာခင်ပြန်ရတော့မှာမို့ ကျွန်တော်နဲ့အတူ အလွမ်းပြေ နားဆင်နိုင်အောင် ဒီသီချင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် အမေ့အိမ်နဲ့ ဝေးကွာနေကြရတဲ့ သားသမီးတိုင်း နွေးထွေးလှတဲ့ အမေ့အိမ်လေးဆီကို ပြန်ချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက်ဖွံဖြိုး တယ်ဆိုပေမဲ့ မေတ္တာစေတနာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အမေ့အိမ်လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ သားသမီးတိုင်းအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အိုအေစစ်လေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ရတဲ့အချိန်တိုင်း အမေ့အိမ်လေးကို လွမ်းလို့ မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက် မေတ္တာစေတနာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အေးမြတဲ့ အမေ့အိမ်လေးဆီကို အောင်မြင်မှု့တွေ ရင်မှာပိုက်ပြီး ပြန်လာနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, July 02, 20115comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့ ကျွန်တော်ချက်စားဖြစ်တာလေးကတော့ အညာပဲဟင်းချို၊ ပန်းသီးထောင်းနဲ့ ငါးပိရည် ပါ။ အညာပဲဟင်းချို ဆိုတာက ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အိမ်မှာဆို ပဲဟင်းချို ချက်ရင် ခွေးတောက်ရွက်၊ ဆူးပုပ်ရွက်၊ ကျီးအာရွက် စတဲ့ မိုးကျရင် ထွက်တတ်တဲ့ အရွက်လေးတွေနဲ့ ရောနှောပြီး ချက်တတ်လို့ အညာပဲဟင်းချိုလို့ နာမည်တတ်လိုက်တာပါ။ ချက်တာကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူမို့ မပြောတော့ပါဘူးနော်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ပန်းသီးထောင်း။ အညာမှာဆိုရင်တော့ ပဲဟင်းချိုချက်ရင် အချဉ်ထောင်းလေးနဲ့ တွဲစားတယ်။ ပဲဟင်းနဲ့လိုက်ဖက်တာတွေကတော့ မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်း၊ သရက်သီးစိမ်းထောင်း၊ သရက်ချဉ်သုပ်၊ ငါးပိကြော်၊ ငါးခြောက်ကြော်၊ စတာလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ အဲ့ဒါတွေကမရှိလို့ သရက်သီးနဲ့မန်ကျည်းသီးစိမ်းအစား ပန်းသီးအစိမ်းလေးတွေကို ထောင်းထားပါတယ်။ အငန်ကတော့ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ ငါးပိရည်ကျိုထုပ် ကျန်နေတာလေးကို ဖျော်လိုက်ပါတယ်။
မပျစ်မကျဲ နဲ့ သောက်လို့အတော်ကောင်းတဲ့ ပဲဟင်းချို
ပန်းသီးထောင်းကလည်း မသိရင် သရက်သီးထောင်းလိုလိုနဲ့
ပဲဟင်းချိုထဲကိုတော့ အားလူသုံးလေးလုံး၊ မုန့်ညှင်းရွက် နဲ့ ကန်စွန်းရွက် နည်းနည်းစီ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ကိုအလွမ်းပြေ ဟင်းလေးတွေချက်ပြီး ဒီနေ့စားဖို့ရာအတွက် ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် စီမံချက်ပြုတ်ထားတယ်ဗျာ။ လာလည်တဲ့သူတွေလည်း စားသွားကြအုံးနော်။ ပန်းသီးထောင်းကတော့ အညာမှာ စားလို့မလွယ်နိုင်ဘူး။ ဒီမှာကျတော့လည်း ပေါလိုက်တဲ့ ပန်းသီးတွေ သရက်သီးတွေကျနေတာပဲဗျာ။ မှည့်လာရင် စားတဲ့ သူတောင်မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ ပန်းသီးအစိမ်းကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ငရုတ်သီးစပ်လေးလည်း ချက်စားတယ်။ အခုဆို ပန်းသီးတွေ ပေါနေပြီဗျ။ အချဉ်ကြိုက်သူများ အတွက်တော့ အဆင်ကိုပြေနေတာပဲဗျို့။ ကဲ အောက်မှာ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ် ကိုယ့်အိမ်လို သဘောထားပြီး အားမနာတမ်းသာ သုံးဆောင်သွားကြဗျ...။
ဒါလေးကတော့ သုံးမျိုးလုံးကို တွဲရိုက်ထားတာ
ဟော့ဒါလေးက မြန်မာတိုင်းကြိုက်တဲ့ ငါးပိရည်ကျိုပါ... နံနံပင်လေးများပါ ထည့်ထားတယ်..။
အားလုံးပဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, June 28, 2011 8 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, June 26, 20115comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရွှေညာသားတို့ ခြေရှည်နေလို့ စာလေးတွေရေးဖို့ အဆက်ပြတ်နေတယ်ဗျာ။ အပြီးမသတ်ရသေးတဲ့ စာလေးတွေလည်း ပြီးအောင်ဆက်မရေးဖြစ်ဘူး။ အညာအကြောင်း ပြောပြချင်တာလေးတွေက အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ ချက်ပြုတ်တာကိုလည်း ၀ါသနာပါလို့ ချက်စားဖြစ်တာလေးတွေကိုလည်း ဘလော့မှာတင်ချင်သေးတယ်။ ချင်တာလေးတွေက များနေလို့ ဘာကိုအရင် လုပ်ရမှန်းမသိအောင်ပါပဲဗျာ။ ဒီနေ့တော့ စာတွေသိပ်အများကြီး ရေးချိန်မရလို့ မနေ့က ချက်စားဖြစ်တဲ့ အစိမ်းကြော်ပုံလေးတွေ ရှိတာကို တင်ပေးလိုက်ပါကြောင်း...။
အစိမ်းကြော်မှာပါဝင်တာလေးတွေကတော့ ပဲပြား၊ အာလူး၊ ဂေါ်ဖီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ တလောက ပင်လယ်စာလက်ကျန်နည်းနည်း နဲ့ ကျန်တာတွေက ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်လေးတွေပါပဲ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 24, 20112comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
တိမ်တွေခမောက်ဆောင်းတော့မည့် ပုပ္ပားတောင်မကြီး အဝေးမှမြင်ကွင်း (တခါတလေ ဆိုရင် တိမ်တွေက တောင်ထိပ်ဖျားလေးပေါ်မှာ စုပုံပြီး အဝေးကကြည့်ရင် တကယ့်ကို ခမောက်ဆောင်းသလားထင်ရတယ်။ တကယ်ကို ကြည့်လို့လှပါတယ်)
အညာကျေးလက်ဒေသတွေမှာ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းတာလေးတွေကို သိသမျှ ပြောပြပါအုံးမယ်။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမပါဘဲ သဘာဝလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းတာလေးတွေပါ။ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အညာကျေးလက်ဒေသတွေ အတွက်ကတော့ မှန်တာမှားတာ နောက်ထားလို့ သဘာဝမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတာလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ရှေးယခင်ကတည်းက မှတ်ယူလာ ခဲ့ကြတာလေးတွေက ယနေ့ထိအောင် ရှိနေပါသေးတယ်။
တိမ်းခိုးတိမ်ရိပ်တွေကြားက တောင်ကလပ်ကလည်း ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ ကြည့်လို့တစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာလေးဆိုရင် ပုပ္ပားတောင်ကြီးနားမှာ တည်ရှိတော့ မိုးလေ၀သနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပုပ္ပားတောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး မိုးရွာမရွာ ခန့်မှန်းကြတယ်။ ရွားနားမှာ တခြားတောင်ကုန်း၊တောင်တန်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုပ္ပားတောင်ကြီးက တခြားတောင်ကုန်း၊တောင်တန်းတွေထက် သိသိသာသာမြင့်မားတာကြောင့် ရွာကနေ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လွယ်လင့်တကူ မြင်နိုင်ပါတယ်။
စိမ်းစိုနေတဲ့ တောင်ကလပ်ရဲ့ မြင်ကွင်းတခု
အထူးသဖြင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့ မိုးရာသီရောက်ပြီဆိုရင် ပုပ္ပားတောင်မကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ ရွာလေးရဲ့ မိုလေးဝသခန့်မှန်းရာ ဌာနတစ်ခုပါ။ ပုပ္ပားတောင်မကြီး ထိပ်မှာ တိမ်ခိုးတိမ်စိုင်တွေ စုဝေးပြီး ခမောက်ပုံစံ ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင် “ဒီနေ့ ပုပ္ပားတောင်ကြီး ခမောက်ဆောင်းတယ်ဟေ့ နေပူလိမ့်မယ်ဟ လှမ်းစရာရှိတာတွေ လှမ်းထားကြ” ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ အဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘဲ တိမ်ခိုးတိမ်လိပ်တွေက ပုပ္ပားတောင်မကြီးရဲ့ ခါးပတ်ပတ်လည်မှာ ဝေ့၀ိုင်းနေပြီဆိုရင်တော့ “ဒီနေ့ ပုပ္ပားတောင်ကြီး ခါးချိုးတယ်ဟေ့ မိုးရွာလိမ့်မယ်ဟ သိမ်းစရာရှိတာတွေ သိမ်းထား” စသဖြင့် လူကြီးသူမတွေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတိပေး ပြောကြားတာကို မိုးရာသီရောက်တိုင်း ကြားရလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ခန့်မှန်းသလို မိုးရွာမည်မရွာဘူး၊ နေပူမည်မပူဘူး ဆိုတာကတော့ သေချာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့တိုင်းတာပြီး ကြေငြာတဲ့ ရေဒီယို၊သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကတောင် ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်ရွေ့ဘယ်လောက် ဆိုပြီးပါသေးတာ သူတို့သဘာဝ မျက်မြင်ခန့်မှန်းပြီး ပြောတာကလည်း ပြောတိုင်းတော့ ဘယ်မှန်နိုင်မလဲဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ မိုးရွာတာမရွာတာထက်၊ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းရတာကိုသာ သူတို့တာဝန်တခုလို့ ထင်မှတ်ထားဟန်ရှိပါတယ်။ မိုးရာသီရောက်တိုင်း ပုပ္ပားတောင်ကြီးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်ခိုးတိမ်စိုင်တွေကို ကြည့်ပြီး မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းတာကတော့ ယနေ့တိုင်ရှိပါသေးတယ်။
တိမ်ခိုးတွေကြားက တောင်ကလပ်ရဲ့အလှက ရှု့မငြီးစရာ
နောက်ပြီးတော့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ကြက်ကလေးတွေ အိမ်တလင်းပြင် နေပူပူမှာ အတောင်ဖြန့်ပြီး နေလှန်းတာ မြင်ရင်လည်း မိုးရွာလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အမြီးပါတဲ့ ပုစဉ်းလေးတွေ မြေပြင်နားကို ကပ်ပြီး နိမ့်နိမ့်လေး ပျံသန်းနေရင်လည်း မိုးရွာမယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
နောက်တခု လယ်ထဲက ပုစွန်လုံး(ဂဏန်း)တွေ ကုန်းပေါ်တက်တာကို မြင်ရင်လည်း မိုးရွာလိမ့်မယ်တဲ့။ သူတို့ဆိုလိုတဲ့ သဘောကတော့ ပုစွန်လုံးတွေက ရေထဲမှာ နေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေဖြစ်တယ်၊ ရေထဲမှာမနေဘဲ ကုန်းပေါ်တက်လာတာဟာ ရေကပူလွန်းပြီး ရေထဲမှာ မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကုန်းပေါ်တက်ပြီး မိုးရွာအောင်ပြောတဲ့ သဘောလို့ မှတ်ယူပါသတဲ့။ ပြီးတော့ ကျင်ကောင်အနက်တွေ ဥလေးတွေကိုယ်စီ ကိုက်ချီပြီး တွင်းပြောင်းတာကို မြင်ပြန်ရင်လည်း မိုးရွာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ ကျင်ကောင်ဆိုတာကလည်း တွင်းနဲ့နေတဲ့ သတ္တ၀ါလေးတွေပါ။ မိုးရွာရင် သူတို့တွင်းတွေထဲ ရေ၀င်တော့ သူတို့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာမည့် ဥလေးတွေကို မဆုံးရှုံးစေချင်တဲ့ သဘောနဲ့ မိုးရွာမှာကို ကြိုသိပြီး တွင်းပြောင်းတဲ့သဘောကို မှတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်မိပါသေးတယ် ငယ်ငယ်တုန်းကဆို အိမ်တိုင်ခေါင်းထဲက တောက်တဲ့ အော်သံကို နောက်ကလိုက်ရေတွက်တယ်။ တောက်တဲ့ စပြီးအော်တဲ့အသံကို မိုး၊ နောက်တစ်ခွန်းအော်ရင် လေ၊ စသဖြင့် တောက်တဲ့အောက်သလောက် မိုး၊လေ ဆိုရင်း လက်ချိုးပြီး ရေတွက်ပါတယ်။ မိုးနဲ့ဆုံးရင် မိုးရွာမယ်။ လေနဲ့ဆုံးရင် လေတိုက်မယ် ဆိုပြီး မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ လူရွှင်တော်များ ပြက်လုံးထုတ်သလိုမျိုး မိုး သူရွာချင်ရွာမယ်၊ မရွာချင်မရွာဘူး ဆိုသလိုပဲပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ စကားပုံတစ်ခုရှိပါသေးတယ် “နွားသိုးနဲ့ မိုး အစိုးမရတဲ့” နွားသိုး ဆိုတဲ့အမျိုးက မဝှေ့ဘူး ဝှေ့မယ် အတတ်မပြောနိုင်ဘူးလေ။ မိုးကိုလည်း ထိုနည်းလည်ကောင်းပေါ့ဗျာ။ တခါတလေ နေပူမယ်လို့ ခန့်မှန်းပြီး မိုးရွာချင်ရွာတာပဲလေ။ မိုးရွာမယ် ခန့်မှန်းရင် နေကပူတတ်တာကိုး။
ဒါလေးတွေက ယနေ့ထိတိုင် ကျွန်တော်တို့ အညာကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပြောင်းလည်းဖြစ်ပျက်မှု့လေးတွေကို ကြည့်ပြီး မိုးလေ၀သခန့်မှန်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနေရာဒေသတွေ မှာလည်း သူ့ဒေသနဲ့သူ အခုလိုမျိုး မိုးလေ၀သခန့်မှန်းတာလေးတွေ ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တာလေးတွေ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မိုးရာသီဆိုရင် အများဆုံးကြားရတဲ့ အညာကျေးလက်က မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းတာလေးတွေပါ။ ကျွန်တော့်ဆီကို အလည်လာရင်းနဲ့ အညာက ဗဟုသုတလေးတွေကို အနည်းငယ်မျှ သိသွားရတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, June 20, 20116comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, June 19, 20112comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, June 18, 2011 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မိလုံးတို့အဖွဲ့လည်း လယ်ထဲကို ပြန်ဆင်းခဲ့ကြသည်။ လယ်ထဲရောက်တော့ ပန်းမှုံက ဘယ်သူ့မှစကားမပြောဘဲ ကောက်ပင်တွေကိုသာ စိုက်နေလေသည်။
"ဟဲ့ ပန်းမှုံ ညည်းကလည်းအေ ငါတို့က ပျော်ချင်လို့ စတာပါဟဲ့။ နောက်ဆို ညည်းမကြိုက်ရင် မစတော့ပါဘူးအေ ငါတို့ကို စကားလေးဘာလေး ပြန်ပြောပါအုံးဟဲ့။" စိတ်ဆိုးသွားသော ပန်းမှုံကို မိလုံးက ကောက်ပင်တွေ စိုက်ရင်းက ပြန်ချော့နေသည်။
"မိလုံးမ အခုမှ လာချော့မနေနဲ့ စတုန်းကစပြီးတော့ တကယ်ပဲ ဧည့်သည်ရှေ့မှာမှ လာစတယ်"
"ငါတို့က ပျော်လို့ပါဟယ် ညည်းကလည်း တကယ်ဖြစ်သွားတော့လည်း ကောင်းတာပေါ့ဟယ် ညည်းရုပ်ရည်နဲ့ မြို့သားတစ်ယောက်တော့ ခေါင်းခေါက်ယူလို့ရပါတယ်အေ့" မိလုံးက ပြန်ချော့ရင်းကပင် စဖြစ်အောင် စလိုက်သေးသည်။
"မိလုံးမ နော် စလာပြန်ပြီ ဒီတစ်ခါဆို ငါနင့်ကို တစ်သက်လုံး မခေါ်တော့ဘူး မှတ်ထား"
"အဲ့လိုတော့ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ပန်းမှုံရယ် ဒီရွာထဲ ပြေးကြည့်မှ ခင်စရာဆိုလို့ ဒီလူတွေပဲ ရှိတာ ညည်းမကြိုက်ရင် ငါတကယ်မစတော့ပါဘူးအေ နော်" ပန်းမှုံက တစ်သက်လုံး မခေါ်တော့ဘူး ကြိမ်းလိုက်တော့မှ မိလုံးတစ်ယောက် လက်လျှော့သွားတော့သည်။
"ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပဲ နင့်စကား သေချာမှတ်ထားနော်"
"အေးပါဟယ် မှတ်ထားပါ့မယ် စိတ်ချ ဟုတ်ပြီလား"
"ကဲကဲ ပန်းမှုံနဲ့မိလုံးတို့ တော်ကြတော့ လယ်က သိပ်လည်းမကျန်တော့ဘူးအေ နောက်တစ်ငန်းပေါက်ရင် ပြီးပါပြီ ငါတို့ အားစိုက်ပြီး စိုက်လိုက်ကြအုံးစို့ နေလည်းမြင့်ပြီ တော်ကြာ အရီးလေး ထမင်းပို့ရောက်လာတော့မယ်" အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်သူ ဘုမက ဆော်အောပြီး စိုက်လက်စကောက်ငန်းကို အပြီး သတ်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ငန်းကို စစိုက်လိုက်ကြသည်။
ပန်းမှုံလည်း ဧည့်သည်ရှေ့မှာမို့ ရှက်ရှက်နဲ့ မိလုံးကို စိတ်ဆိုးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြေးထွက်ခဲ့သော်လည်း စိတ်ထဲမှာတော့ မိလုံးစတာကိုပင် ကျေနပ်နေမိသည်။ အခါတိုင်း သူငယ်ချင်းတစ်တွေ စုဆုံမိကြပေမဲ့ အခုလို မစမနောက်ဘဲ အလုပ်ကိုသာအာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြသည်။ စသည်ဆိုအုံးတော့ တစ်ရွာထဲသားချင်းတွေမို့ ဒီတစ်ခါလောက် မဖြစ်မိတာကိုတော့ သတိထားမိသည်။ လင်းထွန်းနဲ့စတော့မှ ဘာဖြစ်လို့ ရင်ခုန်မိတာပါလိမ့်။ သူကမြို့သားတစ်ယောက် ငါကကျေးတောသူ ကောက်စိုက်သမ ဘ၀ချင်းက ကွာခြားလှတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။ အို သူက ဧည့်သည်တစ်ယောက်မို့ သူ့အပေါ် ငါသတိထားမိတာဖြစ်မှာပါ ဆိုပြီး စိတ်ထဲက တွေးမိသည်။
"ဟဲ့ ပန်းမှုံ မိန်းမ စကားလေး ဘာလေးပြောပါအုံးဟဲ့ ငါလည်း တောင်းပန်ပြီးပါပြီ ဘာလဲ ညည်းက မကျေနပ်သေးဘူးလား" စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ ကောက်ပင်တွေကို အချက်မှန်မှန် ထိုးစိုက်နေသော ပန်းမှုံကို မိလုံးက မေးလိုက်သည်။
"မဟုတ်ပါဘူးဟာ ငါ ကျေနပ်ပါတယ် မိလုံးကလည်း" တွေးနေတဲ့အတွေးတို့ကို ဖျောက်ပြီး မိလုံးအမေးကို ပန်းမှုံ ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
"ဒါဆိုလည်း စကားပြောအုံးလေအေ ညည်းက တကတည်း တေမိမ လုပ်တော့မလို့လား မသိဘူး" မိလုံးက အေးစက်စက် ဖြစ်နေသော ပန်းမှုံကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်သည်။
"မမိလုံး" ရုတ်တရက်ခေါ်သံကြောင့် မိလုံးအသံလာရာဆီသို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ပျိုးထမ်းနေသော လင်းထွန်းက လယ်ကန်သင်းပေါ်မှ ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
"အော် လင်းထွန်း ပြောလေ ငါ့ကိုခေါ်တာ ဘာပြောမလို့လဲ"
"ဟုတ်ကဲ့ နောက်ထပ် ပျိုးဘယ် နှစ်လက်လောက် သယ်ပေးရအုံးမလဲ မေးချင်လို့ပါ" လင်းထွန်းက ပျိုးဆက်သယ်ဖို့ရန်အတွက် မိလုံးကို မေးလိုက်သည်။
"အင်း ဒီစိုက်လက်စ ငန်းပေါက်ရင် ပြီးပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် ပျိုးနှစ်လက်လောက်ဆိုရင် ရပါပြီ နှစ်လက်လောက်ပဲ သယ်ခဲ့ပါ" မိလုံးက သူတို့စိုက်ရန် ကျန်သေးတဲ့ လယ်အကျယ်ကို ကြည့်ပြီး လင်းထွန်းကို ပျိုးသယ်ဖို့ပြောလိုက်သည်။
"ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို ကျွန်တော် သွားသယ်လိုက်အုံးမယ် အကို အေးကိုလည်း အရီးလေးကို သွားကြိုတယ် ခဏနေရင်တော့ ထမင်းတောင်း ရောက်လာတော့မှာပါ" လင်းထွန်းက ပြောပြီး ပျိုးသယ်ဖို့ ထွက်သွားသည်။
"ဟဲ့ ကောင်မတွေ မြို့သားက ထင်တောင်မထင်ရဘူးနော် အပင်ပန်းတော့ ခံနိုင်သားပဲအေ့ ဒီနေ့ငါတို့စိုက်သမျှ ပျိုးပင်တွေ သူသယ်ပေးတာတော့" တောင်သူလုပ်တာကို စိတ်ဝင်စားတယ် ထင်ပါ့အေ။
"မမိလုံးကလည်း သူက မြို့မှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့မိဘတွေက အရင်တုန်းက ရွာမှာနေသွားကြတာလေတော် နောက်ပြီး သူ့ကို ရွာမှာပဲ မွေးသွားတာဆိုတော့ သူလည်း တောင်သူတစ္ဆေ၀င်စားတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ကံကောင်းလို့ ရွာမှာနေပြီး တောင်သူမလုပ်ရဘဲ မြို့ရောက်သွားတာနေမှာပေါ့" အေးချစ်က ပြောတော့ ဘေးက ကောက်စိုက်သမတွေကပါ ၀ိုင်းပြီး ထောက်ခံကြသည်။
"ဟုတ်ပါ့အေ သူတို့များကြတော့လည်း ကံကောင်းပါ့ ငါတို့များကြတော့လည်း လေးတန်းအောင်ပြီးကလည်းက ဒီလယ်ထဲ၊ကိုင်းထဲ ၀င်လုပ်ခဲ့ရတာ နောက်ထပ် ဘယ်လောက်များ ကြာအုံးမလဲမပါဘူးအေ" ဘုမကပါ တောင်သူလယ်သမား ဘ၀ကို စိတ်ကုန်ဟန်ဖြင့် ရင်ဖွင့်လိုက်သေးသည်။
ကဲကဲ နေလည်းမြင့်ပြီ လက်ထဲက ကောက်ပင်လေးတွေ လက်စသတ်ကြတော့။ ပန်းမှုံတို့တစ်တွေ လယ်စိုက်ပြီးလို့ ခြေလက်ဆေးပြီးတော့ အေးကိုတို့ သားအမိလည်း ထမင်းတောင်းနဲ့ ရောက်လာသည်။
"ငါ့တူမတွေ ထမင်းဆာနေပြီလားအေ အရီးလေးလည်း တစ်ယောက်ထဲမနိုင်လို့ အေးကိုအလာကို စောင့်နေရတာနဲ့ နဲနဲနောက်ကျသွားတယ်အေ"
"ရပါတယ် အရီးလေးရဲ့ ကျုပ်တို့လည်း အခုလေးပဲ ကောက်စိုက်ပြီးလို့ ခြေလက်ဆေးပြီးတာ" မိလုံးက ခေါင်းမှာ ပေါင်းထားတဲ့ ပုဆိုးနဲ့ လက်ကိုသုတ်ရင်း ပြောလိုက်သည်။
"အေးအေး လာကြအေ လယ်ကန်သင်းမှာပဲ ၀ိုင်းဖွဲ့ပြီး စားလိုက်ကြ ဟင်းကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးတော် အရီးလေးလည်း ရှိတာလေးကိုပဲ စားဖြစ်အောင် ချက်လာရတယ် အသားငါးလေး ကြုံရင်တော့လည်း အဟုတ်သားအေ့ ငါ့တူမတွေ ပင်ပန်းလှတာ အားတောင်နာတယ်" ဒေါ်ဖွားစိန်က ကောက်စိုက်သမတွေကို ဟင်းကောင်း ချက်မကျွေးရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာ ပြောလိုက်သည်။
"အဲ့လိုလဲ ဘယ်မဟုတ်ပါ့မလဲ အရီးလေးရယ် ကျုပ်တို့အတွက်က မန်ကျည်းသီးစိမ်းဟင်းနဲ့ ငရုတ်သီးထောင်းလေးပါရင် အဆင်ပြေလှပါပြီတော်။ အရီးလေးက ငါးပိကောင် ကြော်ထားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ ထမင်းတော့ စားမြိန်အုံးမှာပဲ" ပန်းမှုံက ဒေါ်ဖွားစိန်ကို နှစ်သိမ့်စကားပြောပြီး ထမင်းစားဖို့အတွက် ပြင်ဆင်သည်။
"ဟဲ့ အေးကို လာဟ နင်တို့ညီအစ်ကိုပါ ငါတို့နဲ့ တစ်ခါထဲ ၀င်စားလေ နင်တို့လည်း မနက်ကတည်းက ပျိုးသယ်ရတာ တော်တော်ပင်ပန်းရောပေါ့ လာလာ" မိလုံးက အေးကိုနဲ့ လင်းထွန်းကိုပါ သူတို့နဲ့အတူ ထမင်စားဖို့ခေါ်လိုက်သည်။
"ဟုတ်သားပဲ လူလေး တစ်ခါထဲဝင်စားလိုက် ငါ့တူလင်းထွန်းလည်း ထမင်းဆာလောက်ပြီ လာလာ ကိုယ့်မောင်နှမတွေ ဘာမှရှက်စရာမလိုဘူး လယ်ကန်သင်းမှာ ထမင်းစားဖူးတာပေါ့" ဒေါ်ဖွားစိန်က အေးကိုနဲ့လင်းထွန်းကို ပန်းမှုံတို့နဲ့ ထမင်းအတူစားဖို့ ပြောသည်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 17, 20113comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook